Syria oo beenisay in ay taageero milatari ka heshay Iran ama Ururka xisbullah – SBC
Syria oo beenisay in ay taageero milatari ka heshay Iran ama Ururka xisbullah
Dimishiq:- Wasiirka arrimaha dibadda Syria ninka lagu magcaabo Waliid Al-mucalim oo shir jaraa’id ku qabtay Dimishiq ayaa beeniyey in dalkiisu uu wax taageero milatari ah ka helay Iran ama Ururka xisbullah ee kadagaalama koonfurta Lubnaan.
Wargeyska Washington Post ayaa dabayaaqadii Bishii May isagoo xiganaya mas’uuliyiin mareykan ah qoray warbixin ku aadan in dowladda Iran ay u dirtay Syria tababaryaal iyo lataliyayaal si gacan looga siiyo maamulka Dimishiq wax kaqabashada mudaaharaadyada looga soo horjeedo madaxweyne Asad tan iyo bishii Maarso ee la soo dhaafay.
Al-mucalim ayaa ugu baaqay mucaaradka in ay ogolaadaan baaqii madaxweyne Asad si ay uga qeyb galaan wadahadalada qaran ee dhowaan kadhici doono dalka Syria.
Sidoo kale wasiirka ayaa ugu baaqay dalalka reer galbeedka in aysan soo fargelin arrimaha gudaha Syria islamrkaana waxa uu ku tilmaamay cunaqabtaynta reer galbeedku ku soo rogeen Syria mid u dhigmata ku dhawaaqid dagaal.
Waliid Mucalim waxa uu ugu baaqay dowladda Faransiiska in ay joojiso siyaasadda isticmaarka ku dhisan iyadoo ku marmarsiyoonayso ilaalinta xuquuqda aadanaha, waa suu hadalka u yiriyee.
Dhanka kale dublumaasiyiin katirsan midowga Yurub ayaa sheegay in midowga Yurub uu isku raacay in la balaariyo cunaqabataynta kadhanka ah maamulka madaxweyne Bashaar Al-asad.